Buy ဆေးလိပ် အတု (16,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 303ရက်​
EVOD = 12000
CE4= 16000
CE4= 19000
eGo Twist = 27000
eGo AIO = 45000
Ijust = 59000
Subox Mini – 75000 kyats
ရရှိနိုင်သော ဒီဇိုင်းများကို message သို. comment တွင်
ဖုန်းဆက်၍လည်း မေးလို. ရပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်သူများအတွက် ဆေးလိပ် အတုလေးများကို
ရောင်းချ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်သူများ၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို. ကူညီချင်သူများအတွက်
ပစ္စည်း ဝယ်ပြီးသူများလည်း အနံ.မျိုးစုံ အငွေ.ဘူးလေးများကို
ဈေးနှုန်း – ၅ထောင်ကျပ် (10ml အရည် ပါဝင်သည်။)
ဆေးလိပ် အနံ. UK
ဆေးလိပ် အနံ. USA
နဲ. တခြား အနံ.များစွာ
ရန်ကုန် မြို.တွင်း ပို.ခ – ၂ထောင်
ရန်ကုန် မြို.ပြင်ပို.ခ – ၃ထောင်
မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ ပို.ခ – ၅ထောင်ကျပ်
အီး -စီးကရက် အသုံးပြုခြင်းဖြင့်
-ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူများသည် အဆုပ်အား ထိခိုက်နိုင်သဖြင့် အီးစီးကရက် သုံးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိူင်ခြင်း
– အန္တရယ် မရှိသော ရေငွေ့များဖြင့် ဖော်စပ်ထား၍ နှလုံးအား ကောင်းမွန်ခြင်း
-အိပ်ခန်း ရုံးခန်း ကား စားသောက်ဆိုင် များနှင့် အခြားဆေးလိပ်မသောက်ရ နေရာများတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု မထြစ်ပေါ်စေပဲ လူအများအား အနံ့ဆိုးနှင့် မီးဘေးအန္တရယ် မှ ကာကွယ်ပေးနိူင်ခြင်း
– အသီးအနှံ၏ အနံ့အရသာများဖြင့် ဖော်စပ်ထား၍္ဏစိတ်ကိုကြည်လင်စေပြီး လန်းဆန်းမှုကို ပေးစွမ်း နိူင်ပါသည်
ဘတ်ထရီ ဖွင့်ခြင်း/ ပိတ်ခြင်း ခလုတ်အား ၁.၅စက္ကန့် အတွင်း ၅ချက်နှိပ်၍ ဘတ်ထရီအား ဖွင့်နိုင်/ ပိတ်နိုင်ပါ သည်။ ဘတ်ထရီ မီး (မှိတ်တုတ်)၂ လင်း လျှင် ဖွင့်/ပိတ် အောင်မြင်ပါသည်။ ဘတ်ထရီအား တာရှည်ခံစေရန်အားဖြည့် ပြီးမှအသုံးပြုပါ။ ပြုတ်မကျမိစေရန်သတိပြုပါ။ ပူပြင်းလွန်းသော၊ စွတ်စိုသော နေရာများတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရ။
ထိန်းသိမ်းပုံ ဘတ်ထရီ နှင့် Atomizer အတွင်းပိုင်းကိုပုံမှန်သန့် စင်ပေးပါ။ ဆေးရည် နှင့် ဖုန်များမဝင်စေရန်ဂရုပြုခြင်းဖြင့်ကာလ ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
e-Liquid (ဆေးရည်) ဖြည့်သွင်းခြင်း Atomizer အဖုံးအားဖွင့်၍ ၄၅ဒီကရီ စောင်းထားပါ။ ထို့နောက် ဆေးရည်အား ထောင့်စွန်းမှ ညှင်သာစွာဖြည်းဖြည်းခြင်း ထည့်ပါ။ Atomizer အလယ်မှ လေဝင်/လေထွက်ပေါက်သို့ ဆေးရည်မဝင်မိစေ ရန်သတိပြုပါ။ အကယ်၍ ဆေးရည်ဝင်သွားပါကအဖုံးအားပြန်လည် လုံခြုံစွာ ပိတ်ပြီး လေဖြင့်မှုတ်၍ထုတ်နိုင်ပါသည်။
ဘတ်ထရီရှော့ဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ် သည့်စနစ် ဘတ်ထရီရှော့ဖြစ်သည်ဟုယူဆပါကသူ့့့ အလို အလျောက်ရှော့ မဖြစ်တော့သည့် အချိန်ထိပါဝါပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အမည်: ဆေးလိပ် အတု